कर्म गर्नुहोस फल आफै मिल्छ - साहित्यकार बिमला हुमागाईं “बोध” - Kanchanjangha Online
कर्म गर्नुहोस फल आफै मिल्छ – साहित्यकार बिमला हुमागाईं “बोध”
कञ्चनजंघा अनलाईन १८ श्रावण २०७८, सोमबार ११:३८ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) १९५ पाठक संख्या
नरम स्वभाव, हसिलो अनुहार भएकी बहुप्रतिभाकी धनि साहित्यकार, गीतकार, शिक्षासेवि तथा संचारकर्मी बिमला हुमागाईं सामाजिक कार्यमा पनि उतिकै सक्रिय छन ।
बिगत एक दशक देखि विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेर देश र जनतालाइ सेवा गर्दै आएकी मिडिया पर्सानालिटि बिमलाले संचारक्षेत्रको माध्यम बाट जनतालाई सुसुचित गर्दै हजारौं पिडित नेपालीहरु दु:खको घाउमा मलम पट्टि लगाउन सफल भएकी छिन। महिला सशक्तीकरण, सम्मान र स्वतन्त्रतालाई प्रबर्धन गर्दै नारि हकहितमा दरिलो आवाज बनेकी ‘बिमला हुमागाईं’ बहुप्रतिभाशाली, भर्सलटाइल नारिको रुपमा परिचित छिन।
भबिष्यमा शिक्षा, साहित्य, राजनीति र सामाजिक कार्यमानै आफ्नो जिबन व्यतित गर्ने सोच बनाएकी बिमला निरन्तर समाज परिबर्तनमा प्रयासरत छिन। कानुनको बिद्यार्थी समेत रहेकी बिमला हुमागाईं “बोध शर्मा” संग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
✍-नमस्कार ! आजभोलि के गर्दै हुनु हुन्छ ?
✍-यति धेरै क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ, समय ब्यबस्थापन कसरि गरिरहनु भएको छ ?
✍-कुन बुक निकाल्ने तयारिमा हुनुहुन्छ ?
✍-सामाजिक कार्यमा समेत तपाइँ सक्रिय हुनुहुन्छ, के कस्ता कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ ?
✍-जीवनको अर्थ के हो ?
✍-जीवनका भोगाइहरु के हुन् ?
जीवन जिउनु एक कला हो । जन्मिएपछि हामी एकदिन मर्नुनै पर्छ । तर, हामी हाम्रो जिबनकालमा कस्तो जीवन बाँच्छौं भन्ने कुरा हाम्रो कलाको कुरा हो । कसैले गुणस्तरिय जीवन बाँच्छन्, कसैले बेकारको जीवन बाँच्छ । एउटा भनाई छ, ‘जीवन कति लामो बाँच्छौं, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । तर, कस्तो जीवन बाँच्छौं, त्यसले खास अर्थ राख्छ ।’
जन्म पश्चात् जीवनलाई सफल बनाउनु उदेश्य प्राप्ति हो । जीवनमा सफलताको लागि इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र कर्मशक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्छ । इच्छाशक्ति र कर्म गर्ने व्यक्तिले नै ज्ञान शक्ति प्राप्त गर्छ । जब निराकार आत्मा, साकार शरीर, इन्द्रिय र मनको साथ मिल्छ, तब शरीरमा शक्तिको सञ्चार हुन्छ । जन्म भएपछि आफ्नो पूर्णशक्तिको विकास गर्नु जीवनको लक्ष्य हो ।
जीवनमा हरेक मानिसको सपना हुन्छ। अधिकांश मानिस आफूलाई सफल, सबल र सक्षम बनाउन चाहान्छन, तर हामीले आफुले भने जस्तो जिबन व्यतित गर्न सकिरहेको हुँदैनौ। तसर्थ सुख दुखको समीश्रणलाइ आत्मासाथ गर्दै सत्कर्म गर्नु जीवनको भोगाइ हो।
✍-तपाईलाइ समाज परिबर्तन गर्न के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
म एउटा राजनीति सिक्दै गरेको महिला हो। नेपालि राजनीति तथा सामाजिक बित्रिष्णाले गर्दा समाज नकारात्मक सोचको सिकार बन्दै गइरहेको छ भने त्यो समाजभित्रका पात्र हामी चाहिँ सकारात्मक कसरी हुन सकौँला ? समाज नकारात्मक सोचले अगाडि बढ्दैन भन्ने थाहा छ । तर, पनि नकारात्मक विचारको ओइरो छ ।
हाम्रो समाजमा आलोचना गर्ने प्रवृत्ति संस्कारकै रूपमा विकास भइरहेको छ, जहाँ इन्टरनेटमा पहुँच हुनेहरूका लागि अहिले आफ्नो गुनासो व्यक्त गर्न फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल राम्रो माध्यम बनिरहेको छ । अहिलेका युवाहरुलाई भविष्य प्रति उसलाई ढुक्क बनाउन सक्नुपर्छ ।
काम गरेपछि सफल भइन्छ, लगानी गरेपछि नाफा हुन्छ, मिहेनत गरेपछि प्रगति हुन्छ, यात्रा प्रारम्भ गरेपछि चाहेको गन्तव्यमा अवश्य पुगिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । बलियो आत्मविश्वास तयार पार्नुपर्छ । यस्तो उच्च मनोबल बनेपछि मात्रै व्यक्तिले हरेक क्षेत्रमा आफूलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभ्याउँछ ।
प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, प्रशंसाले भरिएको समाजमा मात्रै उन्नतिको सम्भावना हुन्छ । निराशा, कुण्ठा मात्रै व्यक्त गर्ने, अरूको अनावश्यक चियोचर्चाे र आलोचना गर्ने संस्कारले सिर्जनात्मकता सम्भव हुँदैन । यसका लागि सकारात्मक सोचकै आवश्यक हुन्छ र समाज परिबर्तन हुन्छ । सामाजिक सोच, विचार, चिन्तन र व्यवहार गतिशील प्रक्रिया हो । समयक्रममा रुपान्तरण अवश्यम्भावी छ । सामाजिक रुपान्तरण सामाजिक विकासका लागि अपरिहार्य छ ।
✍– अन्त्यमा सोध्न छुटेको र भन्न चाहेको केहि कुरा हरु छन् कि ?
मलाई तपाईहरुको लोकप्रिय संचारमाध्यममा आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनु भएकोमा धन्यबाद दिन चाहन्छु। अहिले मुलुक राजनीतिक, आर्थिक संकटमा फसेको छ । दुरदर्सि नेतृत्व देशले नपाउँदा सम्पूर्ण जनताले कष्ट भोग्नु परेको छ।
चांडैनै जनताहरुले सुख शान्तिको अनुभूति गर्न पाएको खण्डमा मुलुक सम्बृदीको बाटोमा उन्मुख होला जस्तो लाग्छ। अबको अबस्थामा हामी आफै चेतनशील भएर मुलुक र समाज परिबर्तनको लागि अग्रसर हुनु पर्छ।
तसर्थ समाज परिबर्तन गर्न हामि आफै बाट सुरु गरौँ। आजको विषम परिस्थितिमा एक अर्कालाई सकेको मानवीय सहयोग गर्न हार्दिक पनि अपिल गर्दछु । गित संगीत, चलचित्र, मोडलिङ र पत्रकारिता क्षेत्रलाइ ब्यबस्थित बनाउन हामि आफै लागि पारौं।